October 1, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha October 1, 2020
(England) 02 Okt 2020. Barcelona ayaa guul ka soo heshay kooxda Celta Vigo oo ay ku booqatay garoonkeeda Abanca Balaidos, kadddib markii ay kaga soo adkaatay 0-3, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Isbuuca afaraad ee horyaalka La Liga. Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala baxay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Barcelona. Daqiiqadii […]Sii akhriso
Arsenal oo iska xaadirisay wareega siddeed dhamaadka ee Carabao Cup kaddib markii ay ka soo gudubtay Liverpool… +SAWIRRO
(England) 01 Okt 2020. Arsenal ayaa iska xaadirisay wareega siddeed dhamaadka ee tartanka Carabao Cup kaddib markii ay kaga soo gudubtay kooxda Liverpool rigoorayaal 4-5 ah, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada wareega 16-ka ee tartankan. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbardhac 0-0 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Liverpool iyo Arsenal. Qeybta […]Sii akhriso
Trump Duluth rally: Demonizing refugees is his Minnesota strategy – Vox.com
Somali News October 1, 2020
Trump Duluth rally: Demonizing refugees is his Minnesota strategy Vox.comSii akhriso
Shaxda rasmiga ah Kooxaha Celta Vigo iyo Barcelona ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
(Spain) 01 Okt 2020. Kooxda Celta Vigo ayaa garoonkeeda Abanca Balaidos ku soo dhaweyn doonto naadiga Barcelona, si ay u wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan kulamada Isbuuca Afaraad ee horyaalka La Liga dalka Spain. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Celta Vigo iyo Barcelona ee horyaalka La Liga dalka […]Sii akhriso
(Liverpool) 01 Okt 2020. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah ee ay garoonka ku soo galayaan kooxaha Liverpool iyo Arsenal. Klopp ayaa saf adag ku soo galay kulankan ay soo dhoweynayaan Gunners, isagoo maanka ku haya haddii ay adkaadaan kulankan inay iska xaadirin doonaan siddeed dhammaadka Carabao Cup. Van Dijk & Salah, halka Jota uu […]Sii akhriso
(Geneva) 01 Okt 2020. Munaasadda isku aadka heerka guruubyada Champions league ayaa la soo gabagabeeyey goordhow, iyadoo sidoo kale xafladdaan lagu bixinayo abaal-marinno kala duwan, abaal-marintii ugu dambeysay ee lagu bixiyeyna waxa ay ahayd abaal-marinta laacibka sanadka ugu fiican Yurub ama xiddiga sanadka ee UEFA. Abaal-marinta laacibka sanadka ee ugu fiican Yurub Sii akhriso
DEG DEG: Isku aadka heerka guruubyada Champions League 2020/21 oo la sameeyey… (Barcelona vs Juventus – Messi & CR7 oo is-wajahaya)
(Geneva) 01 Okt 2020. Waxaa goordhow soo gabagaboobay isku aadka heerka guruubyada Champions League oo caawa lagu sameeyey Waddanka Switzerland. Kooxda reer Spain ee Barcelona ayaa waxa ay guruub la gashay Juventus, taasoo ka dhigan in Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ay isku arki doonaan tartanka Champions League xilli ciyaareedkan. Chelsea ayaa Guruub E la […]Sii akhriso
Soomaaliya October 1, 2020
Muqdisho (SONNA)-Guddomiyeyaasha Labada Aqal ee Baarlamanka Federalka Soomaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxman iyo Mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa si wada jir ah ula kulmay Guddomiyaha Gobalka Benadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamed Maxamud (Cumar Filish). Kulanka ayaa waxay uga wada hadleen arimo ku saabsan Matalaadda Gobalka Banaadir ee Sii akhriso
(Geneva) 01 Okt 2020. Munaasadda isku aadka heerka guruubyada Champions league ayaa socota, iyadoo sidoo kale xafladdaan lagu bixinayo abaal-marinno kala duwan. Hadda waxaa la bixiyey abaal-marinta Weeraryahanka xilli ciyaareedka ee Champions League, waxaana loo magacaabay oo ku guuleystay Weeraryahanka Kooxda Bayern Munich ee Robert Lewandowski. Xiddigan xulka qaranka Sii akhriso
Muqdisho (SONNA)-Ku-simaha Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Soomaaliya, madax ka socotay Mashruuca GEEL iyo qubaro dhanka beeraha ah ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu soo bandhigayay Buugaag ka hadlaya hagaha Tacabka iyo dhoofka Mooska Soomaaliya iyo Fursadaha maalgashi ee beeraha, waxaana buugaagtan diyaarintooda iska kaashaday Wasaarada Beeraha Soomaaliya iyo Mashruuca Sii akhriso